Mpanafika fofona Xiaomi Viomi VF1-CB | TeraNews.net
Xiaomi Viomi VF1-CB
mpanoratra Nikitin Eugenius Navoaka tamin'ny 24.11.2021
Taonjato faha-21 izao, ary ny mpanamboatra vata fampangatsiahana dia tsy mbola nianatra ny fomba hamahana ny olana amin'ny fofona tsy mahafinaritra ao anatin'ny vata fampangatsiahana. Na dia, tsia, marika maro no manana sterilizer rivotra, fa rehefa afaka herintaona na roa dia mijanona amin'ny asany izy. Ary tsy azo esorina ny fitaovana, tsy afaka manova ny sivana ianao - mila miantso ny tompony ianao. Ary ity olana ity dia mandeha isan-taona miaraka amin'ireo modely vaovao rehetra.
Odor neutralizer Xiaomi Viomi VF1-CB - inona moa izany
Araka ny hevitry ny marika sinoa, ny fitaovana compact dia tokony hiady amin'ny bakteria ao anaty vata fampangatsiahana. Ny neutralizer dia mandalo rivotra maloto amin'ny tenany, manadio azy amin'ny sivana manokana. Ny fotoana mahafinaritra dia ny fiasan'ny fitaovana amin'ny toe-javatra hafanana samihafa. Azonao atao ny mametraka ny fitaovana ao amin'ny vata fampangatsiahana, vata fampangatsiahana ary efitrano tsy misy freshness.
Azo antoka fa tsy ratsy ilay hevitra. Nisy zavatra tsy nety anefa, araka ny filazan’ireo tsy mino. Amin'ny lafiny iray, tena manala ny fofon'ny plastika vaovao, lo, trondro ary hena ny gadget. Ny hafalian'ny mpampiasa ihany no tsy maharitra. 6 volana katroka. Ny mpanamboatra dia nilaza ny fe-potoana fiantohana mitovy. Ny famolavolana ny Viomi VF1-CB fofona fofona dia tsy misy fikojakojana. Noho izany, mila maika any amin'ny fivarotana indray ianao mba hahazoana neutralizer vaovao. Ny vidin'ny $ 10 dia tsy dia tsara loatra. Raha maka ny androm-piainan'ny vata fampangatsiahana mandritra ny 10 taona isika, dia tsy maintsy mandoa $ 200 ho an'ny rivotra madio ianao.
Xiaomi Viomi VF1-CB: tombony sy fatiantoka
Ny neutralizer dia manao tsara ny asany ary azo antoka fa hanafoana ny fofona tsy mahafinaritra ao amin'ny vata fampangatsiahana. Izany no tena fahamendrehan'ny mpanadio. Fotoana mahafinaritra - ny habeny sy ny fahaleovan-tena. Vidiny mahasarika - $ 10 mandritra ny 6 volana fiasana.
Ny tsy fahampiana dia ny olana amin'ny fametrahana ny Xiaomi Viomi VF1-CB odor neutralizer ao anaty vata fampangatsiahana. Ao amin'ny dokam-barotra, ny mpampiasa dia mampifandray ny fitaovana amin'ny rindrina anatiny amin'ny fomba kanto mba hamoronana fahatsapana ho mora sy mampionona. Amin'ny fampiharana, sarotra kokoa ny zava-drehetra. Noho ny fisian'ny hamandoana ao anatiny (na dia kely isan-jato), dia tsy azo atao ihany koa ny mametaka ny fitaovana amin'ny rindrina. Mila manasokajy ny tany ho maina ianao ary miomana fa mety hianjera ny fitaovana Viomi VF1-CB mandritra ny fandidiana.
I. raha toa ka efa mahita fahadisoana tanteraka amin'ny neutralizer ny fofona ianao, dia tsy misy sivana HEPA ao anatin'ilay fitaovana (mandritra ny disassembly). Amin'ny endrika izay mahazatra antsika ny mahita izany amin'ny fanadiovana rivotra ao an-tokantrano. Ny fomba fiasan'ny fitaovana - ny mpanamboatra ihany no mahafantatra. Saingy, ny tena zava-dehibe dia mbola miasa izy io, miatrika ny asany mivantana. Te hividy Xiaomi Viomi VF1-CB - mandehana any ity rohy ity.